Madaxweynaha Soomaaliya oo si rasmi ah uga dhagax-dhigay Jaamacadda Ummada Soomaaliya magaalada Qardho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo si rasmi ah uga dhagax-dhigay Jaamacadda Ummada Soomaaliya magaalada Qardho[Sawirro]
QARDHO – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gelinkii dambe ee arbacada si rasmi ah uga dhagax-dhigay Jaamacadda Ummada Soomaaliya(JUS) faraca ku yeelanayso Puntland magaalada Qardho.
Prof. Khaliif Maxamed Barre oo muddo kasoo shaqeeyey Jaamacadii Ummada Soomaaliya isla markaana kamid ahaa dadkii xilka iska saaray dhulka Jaamacadda laga dhisaayo ayaa sheegay in dhulkan muddo dheer loo hayey in Jaamacad laga dhiso ,maantana ay tahay farxad iyo riyadii oo rumowdey.
Prof. Jimcaale oo ah Rektorka Jaamacadda Ummada Soomaalya ayaa munaasabadii dhagax-dhigga ka sheegay in Qardho ay tahay magaalo ku habboon in laga dhiso faraxa Puntland ee Jaamacadda Ummada Soomaaliya.
Waxa uu xusay in Qardho ay tahay magaalo Waxbarasho oo ay ku yaalaan Iskoolo aad u badan kumanaan arday ahna ay wax ka bartaan,sidoo kalena ay ku taalo meel dhexdhexaad ah khariiradad ahaa.
Rektoar Jimcaale ayaa sheegay in kuliyado muhiim ah ay keenayaan magaalada Qardho marka uu dhammaado dhismaha Jaamacadda,wuxuuna bulshada Qardho ugu baaqey in ay u diyaar garoobaan ardey Soomaaliyeed oo ka kala imaan doona daafaha dalka oo dhan.
Prof. Jimcaale ayaa ka codsaday Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaaho in ay dhismaha Jaamadda ee Qardho laga hirgelinayo ay dedejiyaan dhismaheeda kuna daraan qorshaha sanadka.